« Conférence souveraine » : Tsy hihemotra ireo kandidà -
AccueilRaharaham-pirenena« Conférence souveraine » : Tsy hihemotra ireo kandidà
25/10/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ho voasakana sa tsia ny « Conférence souveraine », kasain’ny firaisan’ireo kandidà androany eny amin’ny CCI Ivato. Mandeha mantsy ny feo, fa misy ny fikasan’ny tompon’andraikitra mahefa hanakatona ny trano sy handefa mpitandro filaminana. Ireo kandidà izay nilaza fa tsy hihemotra, n’inona n’inona miseho satria ny firenena no jerena.
Nambaran’ny kandidà Tabera Randriamanantsoa omaly, fa efa tomombana ny zava-drehetra manoloana ny fivoriana mahefa manapa-kevitra, na « Conférence souveraine » atao etsy Ivato androany. Tsy hihemotra rahateo ireo kandidà na misy aza ny fikasan’ny sasany hanakana io fivoriana io, hoy Hatrany Tabera Randriamanantsoa, « anjaran’ ny praiminisitra raha toa izy handefa mpitandro filaminana hanakana ny fivoriambe ». Raha ny feo mandeha amin’ izao fotoana tokoa mantsy, dia misy ny fikasana hanakatona ny Cci Ivato tsy ahafahana miditra eny an-toerana. Fepetra roa no mety hitranga, eo ny fanakatonana ny trano fivoriana, ary hametraka sakana ny mpitandro filaminana. Hatreto tokoa mantsy dia mbola tsy nanome ny heviny mahakasika ity « Conférence souveraine » ity, ny praiminisitra lehiben’ ny governemanta. Izany hoe tsy mazava ny heviny, raha toa mankasitraka na tsia ny fivorian’ireo kandidà.
Manoloana ny fivorian’ireo kandidà androany io, dia nanambara ampahibemaso ny avy amin’ ny HFI, na ny hetsika fanorenana ifotony fa manohana io fivorian’ny kandidà io. Ho azy ireo dia tsy teren-ko masaka tahaka ny voalobo-jaza ny fifidianana, satria misy ny mahazo tombontsoa manokana amin’izany. Alohan’ny rehetra hoy izy ireo dia miainga amin’ny fanatsarana ny lisi-pifidianana ny fanorenana ifotony, ary ahafahana mijery ny ho avin’ny firenena. Ny HFI raha tsiahivina dia efa nametraka fitoriana teny anivon’ny HCC, na ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana, ny amin’ny tokony hijerena ny fanatsarana ny lisi-pifidianana sy ny fifidianana amin’ny ankapobeny. Saingy nolavin’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana izany. Raha ny fanazavana mikasika ny fikarakarana kosa dia efa tomombana ny rehetra, ary maro ireo avy amin’ ny faritra no efa eto Antananarivo amin’ izao fotoana. Nanamarika ireo kandidà fa mahazo manatrika ny fivoriana avokoa ireo vahoaka izay te hanatrika izany.